Na amin’izao aza angamba koa ! Iza moa no mahita ? Hitako mody adala indray ee ! Vao mipoitra avy any ny sary tonga dia aiaiai. Hitako ry bebe Lety no nibaboka mihitsy hoe leo amin’ilay hoe “tsy azo raisina nefa mitombina”. Mahery ianareo, hoy aho. Avy aiza mihitsy ary ny tena haingam-panahinareo ireto ? Indrindra moa fa ianao ry Jean Narivo. Tena tsy diso ny safidin’i Jean Kotomanana manendry anao hitatasika foana aloha hatramin’izao ka ! Mialoha ny hitenenany rahampitso hoe nadio be toy ny ranomamy avy any an-doharano iny latsabato farany teo iny.